musha Horror Varaidzo Nhau New Scream Tv Show Character Updates
by arun April 7, 2014
by arun April 7, 2014 952 maonero
Iyo TV vhezheni yeScream iri pakupedzisira kukanda uye kupfura mutyairi wadzo. TVLine abata tsananguro dzehunhu dzinozoshandiswa kukanda script. Kutevera pamwe nemamuvhi, iyo Scream TV nhepfenyuro inoita kunge ine vateveri vevazhinji vechidiki.
Harper Duval: Tsvarakadenga yemakore gumi nematanhatu "uyo anoverengera zvishoma uye akangwara kuti ave bhatafurayi rezvemagariro" asi zvakadaro akazodzwa neboka rakakurumbira kuti ave mumwe wavo. "Anonzwa mhosva nekuti abva pane yaimbova shamwari yepamusorosoro Audrey," asi zvirinani kuti ane hukama hwe'Gilmore Girls'-esque naamai Maggie kuti varambe vakadzikama.
Audrey Jesen: Haper aimbove BFF anorondedzerwa se "mwanasikana ane bi-curious wemufundisi weLutheran" uyo "anotaridzika zvakanyanya kushevedza." Uyu "arty loner" anorota kuve mugadziri wemafirimu uye anogovera hukama hwepedyo nehunyanzvi hunyanzvi Noah.
Noah Foster: Chakavanzika chaAudrey chapedyo ndeche "kugadzira, kupenya uye tech-savvy zvakakwana kuti ave anotevera Steve Jobs." Rombo rakanaka kwaari, ane ruzivo rwakanyanya ("la la John Cusack achiri mudiki mukurumbira") izvo zvinomubatsira kufamba mudzimba dzechikoro chake chesekondari. Uyezve, Noa ane "ruzivo rwesaikoropidhiya yemabhuku, mafirimu, TV, maapplication, nezvimwe."
Margaret "Maggie" Duval: Amai vaHarper, mumakore avo ekutanga kusvika pakati pe40s, ndiye muongorori wezvekurapa mutaundi, "akura sainzi geek anotamba runako rwake." Maggie anoshandisa yakawanda yenguva yake kuyedza kutsiva chokwadi chekuti baba vaHarper vakavasiya. Ah, uye ari kuchengeta "chakavanzika chakavanzika kubva pane zvaakamboita."
Yakanyorwa naJill Blotevogel (Ravenswood, Harper's Island, Eureka), mutyairi wendege anotanga nevhidhiyo yeYouTube inoenda nehutachiona, iyo inokurumidza kutungamira kumatambudziko kune wechidiki Audrey uye zvinoita kunge anoshanda seiyo "Chinokonzera kuponda kunovhura hwindo kune iro [guta] rake rematambudziko akapfuura."
Iwe unofungei nezve Kupopota kushandurwa kuita TV show? Regai tizive mune zvakataurwa.
Uye kune vese iwe Chema SUPER FANS kunze uko. Tarisa uone uyu muunganidzwa unotyisa.
Ese mana mafirimu eSCREAM anosanganisirwa mune akasarudzika eVaraidzi Editions, ane SCREAM 2's Yekuunganidza Shanduro inongowanikwa neiyi yakarongedzwa seti. Dhizaini yakasarudzika inoratidza yekumashure-kwe-zviono zvinyorwa, bvunzo dzechiso, zvinobuda, uye yakakosha Chikamu cheKucheka chinobvumira vataridzi kugadzirisa zviitiko pamba. DVD-ROM maficha anosanganisira screensaver, trivia mutambo, screenplay uye bara chinyorwa.
Dzvanya apa kuti utenge!